MOTHERS | Steadfast Trading | Apex Auto Body Shop | Page 4
# 09324,24 oz.
Mothers ၏ Back-to-Black တာယာသစ်လွင်ဆေးကို သန့်စင်စေသော အကောင်းဆုံးဓာတ်ကူပစ္စည်းများဖြင့် ဖော်စပ်ထားသည့်အတွက် ချွတ်ရခက်သည့် ဖုန်၊ရွှံ့၊ဆီချေး နှင့် ဘရိတ်မှုန်နှင့် ဆေးဟောင်းများအား မည်သည့်တာယာအမျိုးအစားတွင်မဆို ဖျန်းပြီးသုတ်လိုက်ရုံဖြင့် အလွယ်တကူဖယ်ရှားပေးသည်။ တာယာကိုထိခိုက်စေခြင်းမရှိဘဲ သန့်စင်မှုကို ကြာရှည်ထိန်းသိမ်းပေး ထားသည်။
Mothers ၏ ကော်ဇောနှင့် ကူရှင်ချည်သားရက်ထည်အမျိုးမျိုး သန့်စင်ဆေးသည် သင့်ကားအတွင်းခန်း၏ အရောင်အစစ်အမှန်နှင့် ပင်ကိုစရိုက်ကို ဖွင့်လှစ်ဖော်ပြပေးသည့်အရာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကော်ဇောနှင့် ကူရှင်သန့်စင်ဆေးသည် pH ညီမျှမှုရှိပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်မှုကင်းသည့်အပြင် သင်၏ဗီနိုင်း၊ ကတ္တီပါ၊ ချည်ထည်၊ ကော်ဇောနှင့် သိုးမွှေးတို့ကို ရုပ်ပျက်စေသည့် စွဲမြဲနေသော အစွန်းအထင်းများကို ဖယ်ရှားနိုင်စွမ်း ရှိသည်။ ကားအတွင်း၌သာမဟုတ်ပဲ အိမ်တွင်းသုံးပစ္စည်းများအတွက်လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။
#05316,16 OZ./#05324,24 OZ.
Mothers ၏ Protectant သည် ရာဘာ၊ဗီနိုင်း၊ ပလပ်စတစ်နှင့် ဖိုင်ဘာဂလပ်စ်တို့ကို ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ဒဏ် မှ အတွင်းပိုင်းထိ ဖောက်ထွင်းကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီး ရက်ပေါင်း ၃၀ ထိ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးနိုင်သည်။ ဒက်ရ်ှဘုတ်၊ ဘမ်ပါ၊ တပ်ဆင်ပစ္စည်းများ၊ တာယာများနှင့် အခြားအစိတ်အပိုင်းများကို ပြန်လည်သစ်လွင်စေရန် နှင့် မူလအခြေအနေနှင့် သွင်ပြင်ကို ထိန်းသိမ်းပေးထားရန် ရည်ရွယ်ဖန်တီးထားသည်။ ၎င်းသည် မျက်နှာပြင်ကို ဆီဖြင့်ဖုံးအုပ်ပေးခြင်း မဟုတ်ပါ။ အိုဇုန်းနှင့်မီးခိုးမြူတို့မှ ကာကွယ်ပေးပြီး ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကိုတားဆီးပေးသည့် ဤပစ္စည်းကို ဆေးမသုတ်ထားသည့် မည်သည့်ပလပ်စတစ်၊ ရာဘာနှင့် ဗီနိုင်းမျိုးတွင်မဆို အသုံးပြုနိုင်သည်။
ဤသားရေပြုပြင်ဆေးရည်သည် သင်၏ သားရေအချောအထည်ကို ရေရှည်ထိန်းသိမ်းပေးမည်ဖြစ်သည်။ အညစ်အကြေးများဆေးကြောသန့်စင်ထားသည့် သားရေပစ္စည်းများကို သင်သည် နောက်ထပ် ပေကျံစေလို မည်မဟုတ်ပါ။ သက်တမ်းကြာမြင့်လာသည်နှင့်အမျှ သားရေပစ္စည်းများ၏ သဘာဝအဆီများ ခန်းခြောက်သွား ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးရန် လင်နိုလင်နှင့် တိရစ္ဆာန်ထွက် အဆီများဖြင့် ဖော်စပ်ထုတ်လုပ်ထားသည့် Mothers ၏ သားရေပြုပြင်ဆေးရည်ဖြင့် ဖုံးအုပ်ပေးထားနိုင်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့် နေရောင်၊ သက်တမ်းနှင့် နေ့စဉ်မညှာ မတာ အသုံးပြုခံနေ့ခြင်းများ၏ ဆိုးကျိုးများမှ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းပေးမည်ဖြစ်သည်။
# 06412,12 oz.
၎င်းမှာ သားရေအချောထည်များ အတွက် အကောင်းဆုံးသန့်စင် ဆေးရည်ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုမှုအလွန်များပြားသည့် သားရေ အတွင်းခန်းပစ္စည်းများ၊ အမိုးဖွင့်ကား၏ သားရေမိုးများနှင့် အခြားမည်သည့်သားရေမျိုးကိုမဆို ပုံမှန်ဆေးကြောပေးရမည်။ သားရေသည် သဘာဝပစ္စည်းဖြစ်၍ ထိန်းသိမ်းမှုလိုအပ်သည်။ Mothers ၏ သားရေသန့်စင်ဆေးရည်ကို ဓာတုဗေဒပညာရှင်များက pH ညီမျှမှုရှိစေ ရန်ဖန်တီးထားပြီး သင်၏ အဖိုးတန်သားရေပစ္စည်း၏ အတွင်းအသားနစ်ဝင်နေသည့် ဖုန်မှုန့်များ၊ အညစ်အကြေးများနှင့် အစွန်းအထင်းများကို အန္တရာယ်ကင်းစွာ ဖယ်ရှားပေးသည်။
Mothers ၏ VLR သည် ဗီနိုင်း၊ သားရေနှင့် ရာဘာမျက်နှာပြင်မျိုးစုံကို လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ သန့်စင်ပေး၊ ပြုပြင်ပေးပြီး ကာကွယ်ပေးသည်။ ပိုမိုအားအင်ပြည့်ဝစေပြီး pH ကိုညီမျှစေသည့် ဖော်မြူလာက အလွန်စွဲမြဲနေသည့် မြေသားအညစ်အကြေး၊ ရွှံ့နှင့် စွန်းထင်းမှုများကိုပင် ဖယ်ရှားသန့်စင်ပေးသည်။ တိရိစ္ဆာန်ထွက်ဆီနှင့် လင်နိုလင်တို့ကို ထည့်သွင်း ဖော်စပ်ထားသည့် ဤဆေးရည်သည် ခြောက်သွေ့ခြင်း၊ အရောင်လွင့်ခြင်းနှင့် အက်ကွဲခြင်းများမှ အဆင့် တစ်ခုတည်းဖြင့် လွယ်ကူစွာ ပြုပြင်၊ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်း ပေးသည်။